Telegram | January 2020
Ịwụnye ekwentị na kọmpụta
Onye ozi telivishọn a ma ama dị ọ bụghị naanị na ngwaọrụ mkpanaka na gam akporo na iOS n'ụgbọ, kamakwa na kọmputa na Windows. Wụnye mmemme ọrụ zuru ezu na PC na ọtụtụ ụzọ, nke anyị ga-atụle n'isiokwu a. Ịwụnye telivishọn na PC Enwere naanị nhọrọ abụọ iji wụnye ozi ozugbo na kọmputa gị.
Ndị na-edebanye aha na telegram maka Windows, Android, iOS
Ndị ọrụ na-arụ ọrụ na Telegram maara nke ọma na site n'enyemaka ya, ọ bụghị nanị ikwu okwu, kama ọ na-ejikwa ozi bara uru ma ọ bụ nanị na-adọrọ mmasị, nke onye ọ bụla ga-agbanye na otu n'ime ọtụtụ ọwa egwuregwu. Ndị na-amalite ịmalite onye ozi a na-ewu ewu nwere ike ọ gaghị ama ihe ọ bụla gbasara channelụ onwe ha, ma ọ bụ banyere search algorithm, ma ọ bụ banyere ndenye aha.
Ụzọ iji wụnye onye ozi ekwentị na iPhone
Ngwa ozi ngwa ngwa nke Telegram nke na-agbasa ngwa ngwa n'ụwa nile ma na-aga n'ihu na-emepụta, na-enye onye ọrụ ọ bụla ọtụtụ ihe dị iche iche na-adọrọ mmasị, nke bara uru, na ọbụna ruo ụfọdụ nchịkwa pụrụ iche. Nzọụkwụ mbụ n'ị nweta ohere niile na ọrụ nke usoro mgbasaozi ozi bụ iji wụnye ngwa ahịa ndị ozi na ngwaọrụ gị.
Ịmepụta ọwa na Telegram na Windows, Android, iOS
Telegram abụghị naanị ngwa maka ederede na nkwupụta ụda olu, kama ọ bụkwa ihe dị mma nke ozi dịgasị iche iche nke e bipụtara ma kesaa ebe a na ọwa. Ndị ọrụ ozi na-arụsi ọrụ ike maara nke ọma ihe bụ ihe omume a, nke a pụrụ ịkpọ n'ụzọ ziri ezi ụdị mgbasa ozi, ụfọdụ na-echekwa banyere ịmepụta na ịmepụta ọdịnaya nke ọdịnaya ha.
Iṅomi njikọta na profaịlụ Telegram na Android, iOS, Windows
N'adịghị ka ndị ozi ngwa ngwa, na Telegram, njirimara onye ọrụ ahụ abụghị naanị nọmba ekwentị ya mgbe a na-edebanye aha, kamakwa aha pụrụ iche nke nwekwara ike iji dị ka njikọta profaịlụ n'ime ngwa. Na mgbakwunye, ọtụtụ ọwa na nkata ọha na eze nwere njikọ nke aka ha, nke e gosipụtara n'ụdị nke URL zuru oke.
Ịmepụta mkparịta ụka ekwentị maka Android, iOS na Windows
Ndị ozi n'oge a na-enye ndị ọrụ ha ọtụtụ atụmatụ, gụnyere ọrụ maka ịme oku na vidiyo. Mana n'otu oge ahụ, ngwa ngwa iji ngwa maka nkwurịta okwu site na Ịntanetị bụ ozi ederede. Ejikwa otu ebumnobi nke nkata dị iche iche nke onye ahịa ngwa ngwa na-eme ka ebumnuche nke ịmepụta mkparịta ụka na ndị ọzọ so na ọrụ a kachasị ewu ewu bụ nke a na-akọwa n'isiokwu a na-adọrọ uche gị.
Nwelite ekwentị na ụdị ọhụrụ
Ugbua ndi mmadu nwere ike inweta ndi ozi n'egbuputa na kọmputa na ngwa ngwa. Otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị amara nke software a bụ Telegram. N'oge ahụ, onye mmepe ahụ na-akwado ihe omume a, a na-edozi obere njehie ma na-agbakwụnye atụmatụ ọhụrụ. Iji malite iji mmegharị, ịkwesiri ibudata ma wụnye melite.
Ịwụnye ekwentị na ngwaọrụ gam akporo na iOS
Onye ozi ozi telivishọn, nke Pavel Durov mepụtara, dị maka iji na ntanetị niile - ma na desktọọpụ (Windows, MacOS, Linux), na mobile (Android na iOS). N'agbanyeghị na ndị na-ege ntị na-amụba ngwa ngwa ma na-arịwanye elu, ọtụtụ ndị amaghịkwa otú ha ga-esi wụnye ya, ya mere, n'isiokwu anyị taa, anyị ga-agwa anyị otu esi eme nke a na igwe na-agba agba abụọ n'ime usoro arụmọrụ kachasị ewu ewu.
Tinye ndị enyi telegram maka gam akporo, iOS na Windows
Enwere ike ịkpọ mpaghara nke kọntaktị akụkụ kachasị mkpa nke onye ọ bụla ozi, n'ihi na ọ bụrụ na enweghi ndị na-agagharị, ọnụnọ nke ọtụtụ n'ime ihe ndị nwere ike ịme ka ndị na-eto eto nweta ụzọ maka nkwurịta okwu ga-efunahụ ihe ọ bụla. Tụlee otú e si etinye ndị enyi na Telegram, iji hụ na ị na-arụ ọrụ nke otu n'ime nkwupụta nkwurịta okwu kachasị adaba na ịdabere na ya ruo ugbu a.
https://termotools.com ig.termotools.com © Telegram 2020